Home Wararka Fahad Yasin oo lagu eedeeyay in uu baabi’yay caddeeymihii kiiska Ikraan Tahliil
Fahad Yasin oo lagu eedeeyay in uu baabi’yay caddeeymihii kiiska Ikraan Tahliil
Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo katirsan barlamaanka dowladda federalka Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday, ayaa ku eedeysay hay’adda NISA in ay baabi’isay dhammaan caddeymihii suurtoo galin lahaa in wax laga ogaado cidda ku lug lahayd kiiska Ikraan Tahliil.
Xildhibaan Aamino oo katirsan ehelada Ikran Tahliil, waxay sheegtay guddigii loo xilsaaray baaritanka kiiskan, in hay’adda NISA ay u diiday in ay wareysiyo la yeeshaan dadka lagu tuhmayo in ay ku lug leeyihiin kiiska Ikraan iyo in guddigu baaritaan ka sameeyo goobtii laga qafaashay.
“Maxkamadda iyo xeer ilaalintu waxay noo caddeeyeen in kiiskan ay ku geedaaman yihiin caqabado badan oo aysan suurtagal ahayn in si sax ah loo baaro kiiska, meelna uu ku dhamaado, iyagoo sabab uga dhigaya in loo diiday in ay galaan xaruntii NISA, ama meeshii dhibku ka dhacay, si loo helo xogo sax ah,” ayay tiri xildhibaan Aamino.
Xildhibaannada waxay sheegtay arrimahan oo idil in uu mas’uul ka yahay, taliyaha cusub ee NISA ee uu madaxweyne Farmaajo magacaabay, Yaasiin Faray, kaasoo ay sheegtay in uusan marna doonayn in kiiska wax laga ogaado.
Yaa ka dhigay xag-jir “Cali Xarbi Cali”? Warbaahinta Ingiriiska oo shaacisay Sawirkiisa
Puntland oo fashilisay qorshe ay wateen Taliye Xijaar iyo MW Farmaajo!
Ifafaalo dagaal oo maanta ka jirta tuulooyinka & degaanada hoos yimaada Guriceel
Terrorist investigation opened after British Conservative MP stabbed to death by Somali Muslim migrant
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - October 18, 2021
A Somali U.K. passport-holder who’s believed to have stabbed Conservative MP Sir David Amess to death on Friday in what has been declared a...
Ugandan troops feted with medals for contribution to peace and stability in Somalia
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - October 17, 2021
The African Union Mission in Somalia (AMISOM) has awarded medals and certificates to Ugandan soldiers for their contribution to the ongoing peace and stabilisation...
Somali-origin Suspect in British MP’s Murder Held Under Terrorism Act
The suspect arrested in England's Essex following the killing of British Conservative MP Sir David Amess has been named as Ali Harbi Ali, a...
ICJ verdict on maritime border a fresh test for often shaky Kenya-Somalia ties
The International Court of Justice on October 12 handed down a decision mostly upholding Somalia’s claims in a long-running maritime border dispute with Kenya....
David Amess MP: Arrested suspect is a British national of Somali heritage GB news...
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - October 16, 2021
GB News understands that a 25-year-old man who has been arrested on suspicion of murdering Sir David Amess MP is a British national with...
Yaa ka dhigay xag-jir “Cali Xarbi Cali”? Warbaahinta Ingiriiska oo shaacisay...